११ वर्षमा आयो छोराको खबर, ६ वर्ष अगाडिनै सहिद? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कलाकार गोपाल भुटानीको निधन, अन्तिम संस्कार आजै गरिने
जापानद्वारा १ करोड ४० लाख सहयोग →
नौ महिना गर्भमा राखेर जन्माई/हुर्काएको छोराको मृत्युको खबर कसरी पो सहन सक्छिन् आमाले ? जब अर्जुनले आफूसँगै युद्धमा गएका विकास सहिद बनेको बताए तत्कालै समुन्द्राकुमारी बेहोस भइन् । शनिबार साँझ बेहोस भएर अस्पतालमा उपचार गराई घर फर्केकी समुन्द्राले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘जुन कुरा वर्षौंदेखि मलाई माओवादी नेताले भनेनन् । सायद अहिले यहाँ बैठक नभएको भए छोराको अवस्था’bout थाहा नपाई मर्थे पो कि !’ जेहोस् उनले छोराको मृत्यु भएको छ वर्षपछि भए पनि थाहा पाइन् ।
‘कैयौंपल्ट माओवादी पार्टीलाई कहाँ छ भनेर सोधें । उनीहरूले न त मेरो छोरा’bout जानकारी दिए, न बेपत्ताको सूचीमा नै राखे,’ छोरा बितेको खबरपछि शनिबार साँझयता भोकै रहेकी उनले रुँदै भनिन्, ‘श्रीमान्ले छाडेको २० वर्ष भयो, बुढेसकालको सहारा त्यही एउटा छोरा थियो । आउँछ भन्ने आशा पालेर बसेकी थिएँ तर..!’घर परिवार र आफन्तमा यतिखेर रुवाबासी छ ।
विकास कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा १४ वर्षको उमेरमा ०५६ सालमा माओवादी बनी घरबाट निस्केका रहेछन् । समुन्द्राकुमारी एक छोरी र आमाका साथ पालुङटार-९ मा अर्काको घरमा बस्दै आएकी छन् । नातिको मृत्युको खबरले समुन्द्राकी आमासमेत अचेत अवस्थामा छिन् । दुवैलाई सामान्य उपचारपछि घर ल्याइएको छ ।
विकास ०६१ मा भोजपुरको झोवापोखरीको सशस्त्र प्रहरीको भिडन्तमा सहिद बनेका रहेछन् । भिडन्तमा पर्दा सेक्सन भाइस कमान्डर थिए रे । उनको छाती र पेटमा गोली लागी मृत्यु भएको सँगै युद्ध लडेका अर्जुनले जानकारी दिए । ‘विकासको परिवारलाई थाहा दिने वा नदिने भन्ने हाम्रो योजना थिएन । अहिले मलाई राखिएको घर पनि गन्धर्व थरको भएकाले कुरा निस्किएको हो,’ लिम्बूवान राज्य समितिका सदस्य उनले भने, ‘उनको घर र ठेगाना थाहा नभएर त्यतिबेला हामीले जाकारी गराएका थिएनौं । अहिले जसरी थाहा भयो, यो अकल्पनीय संयोग हो ।’ विकास’boutमा माओवादी तथा राज्य पक्षले कतै पनि तथ्यांक राखेको देखिएको छैन ।
‘आफन्त भन्ने कोही पनि छैन । एक दिन म आउँछु भनेर गएको छोरा फर्केन,’ भावविह्वल समुन्द्राले भनिन्, ‘माइती पनि छैनन् । आमालाई आफैंले पाल्दै आएकी छु । दाजुभाइले वास्ता गर्दैनन् । अब कसरी बाँच्ने हो ?’ उनीहरू चर्चले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएका छन् । गन्धर्व परिवारको जग्गासमेत छैन ।